Nezvedu - Wuwei Hailun Nyowani Zvinyorwa Technology Co., Ltd.
Wuwei Hailun New Material Technology Co., Ltd. rakaumbwa muna Kubvumbi 2013. Zviri kugadzirwa chawo paakapiwa kubudikidza Jiashan Hailun Akanaka Chemical Plant. Inowanikwa muTumen Industrial Zone yeGulang County mudunhu reGansu, kune nzvimbo yepamusoro yenzvimbo nenzvimbo dzinoyevedza, ine Hexi Corridor, tengger renje padyo. Iyo inzvimbo yekutaurirana yeSilk Road.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru aminoguanidine bicarbonate, aminoguanidinium sulphate, Aminoguanidine Hydrochloride nemamwe makemikari akanaka, ayo akakosha ari pakati pakati pemadhayi, ekurapa, mishonga yekuuraya zvipuka, kristal yemvura uye minda yemafuta. Parizvino, isu takagadzirisa pfuma yeRMB mamirioni gumi Yuan. Kufukidza nzvimbo 15,000 mativi metres, kambani yedu ine vashandi makumi mashanu parizvino.
Uye zvakare, kambani yedu inosvitsa hunyanzvi hwemberi nemidziyo yekuita kugadzira. Isu tinoshanda kugadzirwa zvakanyanya maererano neIO9000 system standard. Zvichakadaro, pane yakakwana mhando yekuyedza system yekuvimbisa yakafara vatengi nezvakakwira zvigadzirwa. Zvigadzirwa edu aivigirwa kuna Southeast Asia, Europe uye America.
Iyo kambani ine nyanzvi yemakemikari yekugadzira base mupaki yeindasitiri yeTumen Town, Gulang County, Gansu Province.
Dzidziso yedu ndeyekuti: chinjana kuvimba kwako uye kutsigirwa nebasa uye kutendeseka, kubatsirana, gadzira kuhwina-pamwe chete.
Nezve Jiaxing Dongliang
Jiaxing Dongliang Pharmaceutical Technology Co., Ltd. ndiro bazi redu, rakagadzwa muna 2013. Inyanzvi yekambani yekutengeserana kune dzimwe nyika inobatanidzwa mune zvekutengeserana uye kutengesa kunze. Inoita bhizimusi rekune dzimwe nyika nekunze, Sino yekunze mubatanidzwa, kugadzirwa kwemubatanidzwa, entrepot kutengeserana uye rimwe bhizinesi.
Inonyanya kuita basa rekupinza uye kutumira kunze kwenyika kwakasiyana-siyana kwemakemikari mbishi zvinhu, mapurasitiki resini, madhayi uye anobatsira, pigment uye epakati, zvigadzirwa zverabha, Hardware nemagetsi zvigadzirwa, hofisi zvigadzirwa, tsono machira, zvekuvakisa, zvemagetsi zvigadzirwa, zvipfeko, shangu uye ngowani uye zvimwe zvigadzirwa.